BootCamp dia havaozina amin'ny kinova roa samihafa ho an'ny Mac samihafa | Avy amin'ny mac aho
Apple dia nanavao ny kinova an'ny Bootcamp mankany 5.1 fa amin'ny kinova roa samy hafa izay tsy mitovy amin'ny ekipa itodihana azy.
Ny kinova voalohany dia ho avy manangana 5.1.5621 ary hifantoka indrindra amin'ireo ekipa teo alohan'ireo niseho tamin'ny faran'ny 2013, etsy andaniny misy kinova faharoa navoaka niaraka tamin'ny manangana 5.1.5640, izay natao ho an'ny ekipa sisa manomboka amin'ny faran'ny 2013 ka hatrany.
Ny torolàlana momba ny fisintomana sy ny fametrahana marina dia hita ao amin'ny Pejy ofisialy Apple. Ny rakitra fisintomana dia rakitra .zip noho izany dia hanao indroa tsindrio isika hanalana azy io, raha tsy mivaha ho azy ilay izy.
Tsindrio indroa ny lahatahiry Boot Camp5.
Adikao ny atiny rehetra ao amin'ny fisie zip amin'ny fakan'ny tselatra USB na kapila mafy voalamina miaraka amin'ny rafitry ny rakitra FAT
Rehefa mihazakazaka Windows ianao dia tadiavo ny fampirimana Boot Camp amin'ny haino aman-jery USB noforoninao tamin'ny dingana 3 ary kitiho indroa hanokafana azy.
Kitiho indroa hanombohana ny fametrahana ny lozisialy BootCamp.
Rehefa voatosika hamela ny fanovana ianao dia tsindrio ny Eny ary araho ny torolàlana eo amin'ny efijery.
Ny fametrahana dia mety maharitra minitra vitsivitsy. Aza tapahina ny fizotry ny fametrahana azy. Rehefa vita ny fametrahana dia tsindrio Vitao amin'ny fifampiresahana izay miseho.
Miseho ny dinika famerenana rafitra iray. Tsindrio Eny raha hamita ny fametrahana.
Amin'ireto torolàlana tsotra ireto dia efa azontsika atao ny manana ny kinova farany napetraka izay mifanaraka amin'ny fitsapana ahy izay toa mamaha ny olan'ny famirapiratana mandeha ho azy ao amin'ny Windows miampy fanamboarana kely hafa.
Fanazavana fanampiny - Ampidiro ny Windows 8 miaraka amin'ny Bootcamp amin'ny Mac (III): Fametrahana Windows
Ampidino - BootCamp 5.1.5621 / BootCamp 5.1.5640
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » Bootcamp » Apple manavao ny BootCamp ho an'ny maodely Mac samihafa
Juan Manuel dia hoy izy:
Salama maraina, manandrana mametraka Windows 7 amin'ny Mac aho, hatreto dia vitako ny nanao ny fizarazaranana ary manomboka ny fizotran'ny fametrahana Windows, ny olana mahazo ahy dia ny tsy fahitany ny totozy sy ny kitendry, na ireo an'ny Mac na ny hafa mifandray amin'ny USB.
Misy olona afaka manampy ahy ve.
Valiny tamin'i Juan Manuel
hgffdnmfdfghgf dia hoy izy:
andramo ny mametraka kinova windows taloha ary avy eo manavao azy
Valio ny hgffdnmfdfghgf
Ocniel Hernández Estrada dia hoy izy:
Manana MacBook Pro 13-INCH 2012 aho, ary mila CAMP BOOT mifanentana. BOOT CAMP 5.1.5640 TSY MIASA
Valiny tamin'i Ocniel Hernández Estrada